प्याजको भाउ ५ वर्षकै उच्च, प्रतिकिलो १ सय ७० - Chinari Post
कार्तिक ३०,२०७६ / ०३ : ३६ पूर्वान्ह / 2019-11-16 03:36 am
चिनारी पोस्ट - ७ दिन अगाडि
काठमाडौं, प्याजको मूल्य पाँच वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। प्याज अभाव देखाएर व्यापारीले उपभोक्तालाई प्रतिकिलो एक सय ५० देखि एक सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको कालीमाटी बजारमै थोकमा प्याजको मूल्य एक सय २८ र खुद्रामा एक सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्याजको मूल्य उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको यो पहिलोपटक हो। २०७२ कात्तिक २१ गते प्याजको खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो। २०७३ कात्तिक २१ मा ३५, २०७४ कात्तिक २१ मा ८५ र २०७५ कात्तिक २१ मा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा प्याज बिक्री भएको थियो। दसैंको मुखमा प्याजको मूल्य एक सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर विस्तारै ९० रुपैयाँसम्ममा झरेको थियो।
भारतले असोज दोस्रो साता प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्धपछि नेपालमा अवैधरूपमा प्याज आयात भइरहेको छ। यसले गर्दा नेपाली बजारमा प्याजको खुद्रा मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतमै अहिले प्याजको मूल्य ८० देखि एक सय भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालमा खपत हुने प्याजको कुल परिमाणमध्ये ९८ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ।
प्याज आयात गर्ने थोक व्यापारीका अनुसार भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा अवैध बाटो (तस्करी) बाट आयात भइरहेको छ। ‘अवैध बाटोबाट आयात हुँदा व्यापारीले प्याजको मूल्य आफूखुसी तोकेका छन्’, भारतबाट प्याज आयात गर्ने व्यापारीले भने,‘यसले गर्दा तिहारपछि प्याजको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको हो।’
चोरबाटोबाट आयात गर्दा व्यापारीले आफू अनुकूल हुने गरी प्याजको भाउ निर्धारण गरेका छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा भने पूर्ववत् रूपमै प्याजको आपूर्ति भइरहेको छ। उनले व्यापारीले विभिन्न बाटो प्रयोग गरी प्याज आयात गरिरहेको बताए। उनले भने,‘प्रतिबन्ध भए पनि पहिले जति परिमाणमा प्याज भित्रिन्थ्यो, त्यही परिमाणमा अहिले आएको छ। बजारमा खासै अभाव छैन।’
थोक आयातकर्ता व्यापारीका अनुसार भारतीय प्रतिबन्धपछि त्यहाँका ठूला व्यापारीले ट्रकमै प्याज भारतीय सीमा नजिकको क्षेत्रसम्म ल्याउँछन्। सीमा नजिकै आइपुगेको प्याज ट्रकबाट झार्ने काम हुन्छ। त्यसपछि बिचौलिया (दलाल) ले सीमामा खटिएका सीमा सुरक्षाकर्मीलाई लुकाएर रकम लेनदेन गरी रातिको समयमा साइकलमा राखेर नेपाली सीमासम्म ल्याउने काम हुन्छ। नेपाली सीमासम्म आइसकेको प्याजलाई नेपाली नम्बर प्लेटको ट्रकमा लोड गरी भन्सार कार्यालयमा आवश्यक दस्तुर तिरेर नेपाली बजारमा भित्र्याइन्छ।
व्यापारीको भनाइलाई धेरै हदसम्म भन्सार विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याजको आयात घट्नुपर्ने हो। भारतबाटै औपचारिक रूपमा हुने आयात शून्यमै झर्नुपर्ने हो। तर तुलना गर्दा झिनो परिमाणमा मात्रै आयात घटेको देखिन्छ। २०७५ असोज महिनाको तुलनामा यो वर्षको असोजमा तीन हजार सात सय २३ टन कम प्याज आयात भएको थियो।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा भारतबाट एक अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँकोे प्याज आयात भएको थियो। सोही अवधिमा चीनबाट एक करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँको दुई सय ८१ र नामिबियाबाट तीन लाख ८७ हजारको १२ टन प्याज आयात भएको थियो। २०७५ को असोजमा भारतबाट मात्रै एक अर्ब २७ करोड ५८ लाख ८६ हजारको ३९ हजार रुपैयाँको सात सय ८१ टन प्याज आयात भएको थियो।
नेपालमा भारतका नासिक, इन्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ, लखनउ, गौरखपुर र सिमलालगायत स्थानबाट प्याज आयात हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक दुई सय ७० टन खपत हुन्छ। त्यसमध्ये कालीमाटीमा ७० टन, बल्खु र बानेश्वरमा ३०–३० टनको कारोबार हुन्छ। यी तीन बजारबाहेक अन्य तरकारी बजार, थोक र किराना पसलबाट थप ५० टनको कारोबार हुन्छ।
पाँच वर्षको प्याजको थोक मूल्य (प्रतिकिलो रुमा)
२०७२ कात्तिक २१. ६३
२०७३ कात्तिक २१. २३
२०७४ कात्तिक २१. ६७
२०७५ कात्तिक २१. ३५
२०७६ कात्तिक २१. १२८